Yepasichigare Pasirose, Rarest Paseka Haggadot
musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » tsika nemagariro » Yepasichigare Pasirose, Rarest Paseka Haggadot
Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose • tsika nemagariro • Kodzero Dzevanhu • Israel Breaking News • nhau • ushanyi • Kufamba Kwamugumo Kwidziridzo • Zvakavanzika Zvokufamba • Kufamba Wire Nhau • Trending Now • Akasiyana Nhau
Paseka, kana Pasika muchiHeberu, ndeimwe yezororo rakakosha kwazvo pakarenda yechiJuda uye gore rino parizvino rinopembererwa kutanga munaKurume 27 pakuvira kwezuva uye kupera manheru munaApril 3. Munguva yemutambo, maJuda anocherekedza vanobvisa zvidimbu zvavo zvembiriso. chingwa uye vanobata chikafu chemhemberero chinozivikanwa seSeder. Iyo iri panguva yeSeder iyo iyo Haggadah inoverengwa.
IHaggadah chinyorwa chinorondedzera nyaya yekusunungurwa kwevaIsraeri vekare kubva muhutapwa muEjipitori, sezvakataurwa muBhuku raEksodho. Raibhurari Yenyika Yese yeIsrael inosimbisa muunganidzwa muhombe
Kana mhuri dzechiJuda pasirese dzakaungana dzakakomberedza tafura yePaseka vhiki rino, vari kuverenga kubva pane chinyorwa chakashanduka kwemazana emakore uye chakabatsira kutaurira nekudzokorora nyaya yePaseka kuzvizvarwa zvisingaverengeke: iyo Haggadah.
Raibhurari iyi inochengetera muunganidzwa muhombe weHaggadot, kubva pane zvinyorwa zvekare zvakadhindwa kusvika kuzviwanzo zvakanyorwa nemaoko zvemuzana ramakore rechi12
IHaggadah chinyorwa chinorondedzera nyaya yekusunungurwa kwevaIsraeri vekare kubva muhutapwa muEjipitori, sezvakataurwa muBhuku raEksodho.
Kune avo vanoshuvira kuongorora nhoroondo yayo yakapfuma uye kukosha kwetsika, hapana imwe nzvimbo iri nani yekuzviita kunze kweNational Library yeIsrael muJerusarema, inochengetera muunganidzwa mukuru weHaggadot [muzvizhinji zveHaggadah] pasi rose.
Pakati pezvinyorwa zvaro zvePaseka zvinokosheswa pane zvisaririra zvemumwe wevapenyu vekare Haggadot.
Chimwe chekaresa chakanyorwa nemaoko chePaseka, chakanyorwa muzana ramakore rechi12 uye chakawanikwa muCairo Genizah. (Raymond Crystal / Iyo Midhiya Line)
"Uyu ndiye mukuru weHaggadah muunganidzwa," Dr. Yoel Finkelman, muchengeti weHaim naHanna Salomon Judaica Ungano paNational Library, akaudza The Media Line sezvaaivhura zvine hungwaru kusimba kwenyaya iyi.
Haisi Haggadah yakakwana; yakabva kuCairo Genizah ine mukurumbira uye yakanyorwa zvine hungwaru kune gumi nevavirith "," akadaro Finkelman. "Zvinonzwisisika."
Akanyorwa nemaoko pachikanda, zvidimbu zvakakosha zvakawanikwa pakati pemapeji mazana mana nemazana nezvimedu zvinoumba Cairo Genizah, muunganidzwa unoshamisa wemagwaro echiJuda akachengetwa mudura reSinagoge raBen Ezra muOld Cairo, Egypt.
Sekureva kwaFinkelman, kune angangoita zviuru zvisere zvetsika Haggadot muunganidzwa weNational Library, kuwedzera kune zviuru zviuru zvekare zvisiri zvetsika. Vanouya mumitauro yese, saizi uye zvitaera zvehunyanzvi.
Bhuka uye Kufamba uine Ruvimbo kuSandals Resorts
Air Canada Yakagadzirira Kubatanidza Canada neUS Iine Kumusoro ...
Kusimbisa kufamba-kwoushamwari kufamba kune zero
Cayman Islands Inozivisa Chirongwa Chekuvhurazve ku ...
MaAmerican Vanoda Zvishoma Booze paNdege
COVID-19 furlough inopera panguva yakaipisisa yekushanya kweUK
Ndiani asingatenderi mushonga weRussia COVID-19 pamusoro ...
Etiopiya Airlines uye Liege Airport Vanowedzera ...
US inowedzera kuvharwa kwemiganhu yenyika neCanada uye ...
Ndege nyowani kubva kuFlorida kuenda kuSt Martin
Kubhuka kuenda kuHawaii ikozvino hupenyu nerufu ...
Kutya kwe COVID-19 Mhando mukudonha
IATA: Kudiwa kwekufamba kwakaratidza kunatsiridza kumahombekombe muna Chivabvu
World Tourism Network Bangladesh Chitsauko Hutungamiri ...
COVID-19 Delta Variant inofamba ichitenderera pasirese
Flynas anozivisa kunonoka kwendege dzakananga pakati peKSA ...
Zvitsva Zvifambiso Zvekufambisa zveHawaii Vashanyi
Hotera yeMohonk Mountain House muNew York: Presidential ...
Rowdy Frontier Airlines Passenger Duct-Yakakwenenzverwa kuSeat
Seychelles inoba "Iyo Yepamusoro Gumi Gumi Yakaisvonaka ...
Ko Ryanair's Bullish Zhizha 2022 Zvirongwa Zvinobhadhara Zvikwereti?
Thailand inovhurazve Phuket kune vachengeti vekunze vashanyi ...
Chitima + Mhepo: Air France inosimbisa kuzvipira ku ...
Sandals Resorts International inorangarira muvambi ...